“Sool, Sanaag & Cayn ma jiro maamul si toos ah uga shaqeeya, dadka halkaasi degganna allaa u maqan? Axmed Karaash.. – Radio Daljir
Awr-boogays, July 19 – Wasiirkii hore ee duulista hawada iyo garoomada Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash) oo hadda socdaal ku jooga deeggaanka Awr-boogays oo ka tirsan degmada Xuddun ee gobolka Sool ayaa sheegey in dhibaatooyin bini?aadatinimo oo aad u daran ay ka jiraan gobollada Sool, Sanaag, & Cayn, waxaana uu si gaar ah farta ugu fiiqey, xaaladaha caafimaadka, waxbarashada iyo nolasha dabiiciga ah.
Axmed Karaash, oo hadda ah hogaamiyaha ciidan-beeleed ka soo jeeda gobolka Sool ayaa wax-kama jiraan ku tilmaamey in socdaalkiisu ku salaysan yahay weerarro uu ku qaadayo magaalada Laas-caanood oo ay gacanta ku hayaan maamulka Somaliland.
Md Axmed Karaash, ayaa dhinaca kale sheegey in degmada Xuddan oo ay joogaan ciidanka ka tirsan Somaliland ay socdaal ku sii mareen, balse aysan jirin wax dhibaato ah oo dhexmartay ciidankaasi.
Md Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, wasiirkii hore ee duulista hawada iyo garoomada Puntland ayaa tilmaamay inay ka go?antahay sidii mar un ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen gobolka Sool, isla markaana ay wadaan abaabul-ciidan oo xoogan, waxaana uu hadalkiisa raaciyay iney rajo-wacan ka qabaan hawsha ay gacanta ku hayaan.